Dia ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Kiorda – nov 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2018 6:54 GMT
The Kurdistan Bloggers Union manoratra momba ny fakàn-tsary fitsikilovana napetraka tao atsimo-atsinanan'i Torkia mba hanarahamaso ny vahoaka Kiorda any. Misy ihany koa ny lahatsoratra mahaliana (sy ny fanamarihan'ny mpaneho hevitra) momba ny foko sy fandinihana boky navoaka momba ny boky vaovao nosoratan'i Stephen Kinzer momba ny Kiorda ao Torkia.
Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes manoratra momba ny firoboroboan'ny fironana Islamika mampiahiahy any Iràka, ary ny fitoniana tamin'ny fanasaziana ny orinasa Holandey Van Anraat noho ny fanampiany ny fametrahana etona mahafaty tao Halapia tamin'ny taona 1988. Mirary krismasy ho an'ireo mpamaky azy ihany koa izy.
Mirary krismasy ihany koa i Miriam avy ao amin'ny Pearls of Iraq. Namoaka fanamby ho an'ny haino aman-jery mahazatra mba hitatitra momba ny ezaka fanarenana indray ny tanàna ao Iraka ihany koa izy.
From Holland to Kurdistan manana vaovao antsipirihany momba ny fanamelohana ilay mpandraharaha Holandey Van Anraat (lohahevitra noresahan'ny Iraqi Kurdistan sy Roj Bash! koa izany!). Miresaka momba ny tsaho mahakasika ny drafitra Kiorda, Sonita sy Shitta hampizara an'i Kirkuk ao avaratr'i Iraka/atsimon'i Kurdistan ihany koa i Vladimir.
Rasti manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny firotsahan'ny Amerikana any Afovoany Atsinanana sy ny fomba tokony hampiasan'i Etazonia ny tombony ananany amin'izao fotoana izao mba hanerena ny raharaha Kiorda amin'ny Repoblika Tiorka. Nitsikera an'i Tiorkia noho ny anjara asany amin'ny fikasana hanakatona ny fahitalavitra Kiorda Roj TV any Holandy ihany koa izy. Ho fampahalalana bebe kokoa momba izany sy ny fepetra noraisina, dia tsidiho azafady ny Save Roj TV!.
Farany ao amin'ny lisitra ananantsika androany ny Welcome to East Kurdistan izay niresaka be momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Iran, anisan'izany ny fanapahan-doha an'ilay tanora mpikatroka Kiorda, ny fankatoavan'ny mpitondra fivavahana ny fakàna vehivavy Iraniana/ Kiorda an-keriny sy ny fanamelohana olona hanapahana ny rantsa-tanany.
Ny fitateram-baovao omena eto amin'ny Global Voices dia voafetra indrindra ho an'ny blaogy Kiorda amin'ny teny Anglisy, raha toa ka liana amin'ny bilaogy Kiorda amin'ny fiteny hafa ianao (toy ny Holandey na Alemana ohatra) na raha liana hahita zorom-baovao amin'ny tontolon'ny blaogy Kiorda ianao, dia jereo ny bilaogy Kurdistan Blog Count..
Amin'ny taona vaovao indray!